Tovovavy Mpikatroka Ao Kyrgyzstan Tsy Lany Lohahevitra Horesahina · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 03 Septambra 2014 16:07 GMT
Tetikasa nahazo vatsy avy amin'ny Rising Voices.
Volana namokatra hoan'ireo tovovavy mpikatroka ao Kirghizistan ny volana Aogositra.
Efa manana hevitra tsara sahady amin'izay hosoratanay izahay. Anisan'ireo lohahevitra nodinihan'ny mpandray anjara tamin'ny atrikasa ny herisetra isan'andro ao an-tokantrano sy an-tokotany, ny tsy fahazoana mivezivezy malalaka, ary ny tsy fitovian-jo eo amin'ny lahy sy ny vavy. Te-hanoratra momba ny raharaha ataonay ao an-trano mandritra ny fotoana hijeren'ny dadanay sy ny anadahinay fahitalavitra ihany koa izahay, ary ny fomba tsy maintsy hitafinay akanjo na zipo raha tsy izany iharan'ny fanorisorenana eny an-dalambe. Tsy avela ho marani-tsaina sy hianatra momba ny siansa izahay, tsy mahazo manapa-kevitra ho anay izahay, fa ny fiarahamonina no mandray ny fanapaha-kevitra ho anay. Nalaina an-keriny ho atao vadin'olona ny namanay ary nanambady aloha loatra. Te-hanoratra momba ny kolontsain'ny «uyat” (henatra) sy ny “el emne deit” (inona ny holazain'ny olona?) izahay. Nampianarina mba ho menatra amin'ny vatanay sy ny ara-pananahanay izahay ary hankatò ny fianakavianay/lehilahy.
Misy ny olana momba ny herisetra ao amin'ny sekolinay. Tsy mba manao ezaka hisorohana ny herisetra ny mpampianatra ary misy mihitsy aza ny sasany midaroka mpianatra. Misy ihany koa ny olana hafa ao an-tsekoly, tahaka ny fampitahorana amin'ny endrika daroka, fanevatevana sy ny teritery ataon'ny namana.
Indrisy fa maro ireo tsy te hiresaka izay zava-mitranga, satria tsy mahita olona te-hanakana ny herisetra izy ireo. Matahotra izahay indraindray hiresaka malalaka amin'ny ray aman-dreninay, ny mpampianatra anay, sy ny hafa satria matahotra ny hiharan'ny herisetra indray izahay.
-mpandray anjara amin'ny atrikasa
Nandritra ny atrikasa, nizara fahaizana momba ny fomba fampiasana sy ny fiasan'ny finday raitra (smartphone) niaraka tamin'ireo tovovavy izahay. Nizara vaovao momba ny fampiasàna ny sary sy ny lahatsary amin'ny finday raitra ny iray tamin'ireo mpandray anjara. Ny iray hafa niresaka momba ny fandraisana an-tsoratra sy ny fandraisam-peo, ny hafa niresaka momba ny fiantsoana sy fandefasan-kafatra, nisy nampianatra momba ny fidirana tambajotra sosialy sy ny famahanam-bilaogy. Tsy lesona tahaka ny mahazatra antsika any an-tsekoly, izay matetika mahasorena sy voafetra, ireo. Nizara ny traikefanay sy ny eritreritray fotsiny izahay.
Nientanentana nanoratra lahatsoratra momba ny fiainany ny tovovavy iray avy ao an-tanàna ambanivohitra Kirghiz, ary efa nanomboka nanao izany tao amin'ny pejy Facebook-ny izy. Nofaritany tamin'izany ny fomba fikarakarany ireo omby sy ny fiotazana voaroy hamidy sy hahazoam-bola hianarana teny Anglisy. Te hahay teny Anglisy mafy izy. Misy lahatsoratra vitsivitsy nosoratany eo ambany (nahazoan-dalana taminy ny fandikany izany indray), izay ahitana vaovao momba ny zavatra ataony andavan'andro:
Oee, hitako tao amin'ny tranon'ny namako ny ombiko very, saingy nosimbainy ireo voaroy rehetra tao amin'ny zaridainan'izy ireo.
Tsy hino an'ity ianao, fa nioty voaroy nandritra ny 11 ora aho. Natomboko tamin'ny 9 ora maraina ary nofaranako tamin'ny 5 ora hariva. Tsy ratsy, sa tsy izany? Nahangona voaroy 46 kapoaka aho ankehitriny ary nivarotra izany 65 soms (vola ao amin'ny faritra).
Saingy taty aoriana, nahitana fandinihana bebe kokoa momba ny fahasarotan'ny fiainana ao an-tanàna ny lahatsorany :
Fiainana any ambanivohitra …ahoana ny fiheveranao izany?
Samy manana ny fiainany ny rehetra. Miankina amin'ny fomba fahitany ny fiainany manokana izany. Nahasorena ahy ny fiainana ao ambanivohitra ary nahatsiaro tsy te-ho velona intsony aho. Saingy indraindray, te-hankafy fotsiny ny fiainako aho. Matetika tsy azoko hoe ho an'iza no hivelomako, saingy mbola niaina ny fiainako ihany aho.
Maka voaroy isan'andro aho, raha miasa mafy noho izaho ny sasany. Sarotra ho azy ireo (ny asa), fantatro izany. Soa ihany fa tsotra kokoa ny fiainako.